TARREE GALMEE GOOTOTA Oromo, Zoonii Kibbaa keeessatti WAREEGAMAN Ebla 15 – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTARREE GALMEE GOOTOTA Oromo, Zoonii Kibbaa keeessatti WAREEGAMAN Ebla 15
TARREE GALMEE GOOTOTA Oromoo ,Zoonii Kibbaa keeessatti WAREEGAMAN Ebla 15, Guyyaa Goototaa waan taheef waliin yaadadhaa bakka jirtanitti.
Maqaa ABOtiin badii tokko malee sabboontoota Oromoo hidhuu fi dararuun haa dhaabbatu
Godinaalee Oromiyaa dhihaa
Gujii lamaani fi
Boorana keessatti ilmaan Oromoo maqaa ABO tiin hidhuun jabaatee itti fufeera. Godinaalen kunniin akkuma bara #wayyaanee kommand postiin itti labsamee waraanni irratti bobbaafamee bulchiinsa waraanatiin bulaa jiru. Sabboontonni Oromoo saba isaanitiif quuqama qaban badii tokkoon maletti humna waraanaa itti bobbaafameen hidhamaa jiru.
Mootummaan gama tokkoon dimokraasii jechaa gama kaanin uummata Oromoo maqaa ABOtiin hidhatti guurun gochaa wayyaanee irra deebidhaan raawwachuudha. Hooggantoonni EPRDF kan wayyaanee wajjiin waggaa 27 guutuu gochaa duguuggaa sanyii raawwatan nagaan biyya keessa yeroo jiraachaa jiranitti,Qaamota seerri hin jiru mootummaan hin jiruu nutuu mootummaadha jedhanii jeequmsa kaasaa jiran seera osoo hin qabsiisne ilmaan Oromoo kaleessa qabsoo hadhaawaa gochuun aangootti isaan baasan deebisanii hidhuu fi dararuun yakka guddaadha.
Uummanni Oromoo yeroo falmaa hadhaawaa godhee jijjiirama fidee boqonnaa argachuu qabutti boqonnaa dhabee hiraarfamaa jira. Mootummaan uummata Oromoo maqaa waraana WBO deeggartuun kan hidhu yoo tahe hooggansi ABO waraana WBO uummataa fi abbootii Gadaa Oromootti waan kenneef yoo hidhuu barbaade WBOn kan nama muraasaa osoo hin taane kan uummata Oromoo waan taheef uummata Oromoo hunda hidhuu qaba.
Kanaan alatti yeroo uummanni Oromoo roga hundaan alagaan hidhatee itti duulaa jirutti, yeroo sabni biraa hidhatee bilisaan socho’aa jiru kanatti ilmaan Oromoo maqaa WBOn jumlaan hidhaatti guurun fudhatama tokkollee hin qabu. Yeroo ammaa biyya kana keessatti kan hidhamas jiru uummata Oromoo qofaadha. Mootummaan nama hidhannoo hin qabne kan nagaan badii tokkoon malee socho’u jumlaan hidhaatti guurun gochaa wayyaanen Oromoo irratti raawwatteen kan adda jiruu miti.
Mootummaan ilmaan Oromoo irratti waraana command post labsee ilmaan Oromoo ittiin hiraarsaa jiru uummata irraa